Alluter Technology (Shenzhen) Co., Ltd waa mid ka mid ah taasoo keentay saarayaasha diirada sputtering ee Shiinaha. Waxaa la aasaasay 2007 iyo ballaarinta deg deg ah in ay shirkad uu leeyahay ka shaqeeya 200 shaqaale oo lagu daray taasoo keentay by kooxda khibrad maamul.
Waxaa jira shan saldhig oo-soo-saarka aannu shirkadda, daacad-hantida (Plasma xereen Factory, Machine Labor-intensive saaridda Xarumaha Horumarinta Factory, Research iyo, Large Non-caadiga ah soo saara Factory, madax adkaadeen Waxyaabaha Factory) play .Giving to our shirkadda ee dhammaan hawlaha qalabka kala duwan si ay u gaaraan silsiladda link habka ugu xirfadeed, oo daboolaya dhammaan dhinacyada wax soo saarka bartilmaameedka.
ALLUTER siin karaan biraha ugu wanaagsan ee tayada dhif iyo bartilmaameedyada bir aan ferrous, kala duwan ee daawaha wax bartilmaameedyada, bartilmaameedyada dhoobada, budo iyo granule bartilmaameedyada, ugu waaweyn waxaa ka mid ah CR, Ti, Sus, Si, SN, C, Ito, NiCr, huhu, SiAl , CR + CU addoonsi, ka sokow, sidoo kale metallization bartilmaameedka iyo adeegga addoonsi.
ALLUTER taagan dambeeya saarkooda, waxyaabaha ay sidoo shahaado by SGS, MSDS, RoHs, gaari for USA Market, Market Aisa, iyo suuqa Yurub.
The gool shirkadda ALLUTER waa inay gaarsiiyaan heerka koowaad wax soo saarka diirada Sputtering iyo adeegga ku qanacsan in ay macaamiisheeda qiimeeyo, aynu xirfadeed si ay u noqdaan macaamiisha qiimaha.
Rumeeya ALLUTER diirada sputtering ahaan doonaa Kan aad dooqa koowaad ee sputtering qeybiyaha bartilmaameed!
Alluter Soo Kordhiyay qorshaha Capacity ee 2017-2018
Shirkadda Alluter waxaa la ballaariyo awoodda wax soo saarka diirada Rotary ee Shiinaha on Oct 2017 Ballaarinta kordhinaysa xaddiga by 80% in warshad Guizhou. Awoodda kor u oggolaan doonta Alluter si ay u taageeraan si degdeg ah g ...